आमाबुबा ममाथि भरोसा गर्नुहुन्‍न | युवाहरू सोध्छन्‌
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्होबो एफिक एस्टोनियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक काजाक (अरबी) काम्बा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्षोसा गा गून ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डाँग्मे डेनिश तामिल तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाओले बाश्कीर बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज मङ्गोलियन मले मल्यालम माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सुन्डा सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
तपाईँले के बुझ्नुपर्छ?
तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ?
आमाबुबाले तपाईँमाथि कत्तिको भरोसा गर्नुहुन्छ भन्‍ने कुरा तपाईँ कत्तिको भरोसायोग्य हुनुहुन्छ, त्यसैमा भर पर्छ। आमाबुबाको कुरा मान्‍नु भनेको ऋण तिर्नुजस्तै हो। त्यो ‘ऋण’ आमाबुबाप्रतिको आज्ञाकारिता हो। तपाईँ ‘ऋण तिर्ने’ सन्दर्भमा जति भरोसायोग्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट त्यति नै ‘धेरै ऋण’ (वा स्वतन्त्रता) पाउनुहुनेछ। अर्कोतर्फ तपाईँले आफ्नो व्यवहारबाट उहाँहरूको भरोसा जित्न सकिरहनुभएको छैन भने उहाँहरूले तपाईँले पाइरहनुभएको स्वतन्त्रतामा कटौती गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
भरोसा जित्न समय लाग्छ। आमाबुबाले तपाईँलाई अझ धेरै स्वतन्त्रता दिएको चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दिनदिनैको व्यवहारबाट आफू भरोसा गर्न लायकको छु भनेर साबित गर्नुपर्छ।
साँचो कथा: “किशोर छँदा मेरो आमाबुबा मबाट के चाहनुहुन्छ भनेर मैले राम्ररी बुझेको थिएँ। त्यसैले उहाँहरूको अगाडि म उहाँहरूले चाहेजस्तै गरेको ढोँग गर्थेँ। मेरो यस्तो व्यवहारले गर्दा उहाँहरूलाई ममाथि भरोसा गर्न गाह्रो भयो। केही समयपछि मैले यो कुरा बुझेँ: अझ धेरै स्वतन्त्रता पाउनको लागि चोर बाटो अपनाउन सकिँदैन। अरूको भरोसा जित्न आफू भरोसायोग्य हुनै पर्छ।”—क्रेग।
गाह्रो हुँदा समेत आफूलाई भरोसायोग्य साबित गर्नुहोस्‌। सबैबाट गल्ती हुन्छ तर त्यसलाई झूटले ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नुभयो (वा पूरै साँचो कुरा बताउनुभएन) भने आमाबुबाको तपाईँमाथिको भरोसा चकनाचुर हुन्छ। अर्कोतर्फ तपाईँले आफूलाई हर क्षेत्रमा इमानदार साबित गरिसक्नुभएको छ भने तपाईँका आमाबुबाले तपाईँ परिपक्व हुनुहुन्छ र आफ्नो गल्ती स्विकार्न पछि हट्‌नुहुन्‍न भनेर बुझ्नुहुनेछ। त्यस्तो व्यक्‍तिमाथि भरोसा गर्न सजिलो हुन्छ।
“तपाईँले कुनै गल्ती गर्दैमा अरूले तपाईँमाथि भरोसा गर्न छोड्‌छन्‌ भन्‍ने होइन। तर आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नुभयो भनेचाहिँ अरूले तपाईँमाथि भरोसा गर्न पक्कै छोड्‌नेछन्‌।”—अन्‍ना।
बाइबल भन्छ: “हामी सबै कुरामा इमानदार भई चल्न चाहन्छौँ।”—हिब्रू १३:१८.
यसबारे सोच्नुहोस्‌: आमाबुबाले तपाईँलाई कहाँ जान लागेको र त्यहाँ गएर के-के गर्नेछौ भनेर सोध्नुहुँदा के तपाईँ उहाँहरूलाई एक-एक कुरा बताउनुहुन्छ? अथवा आमाबुबाले कहाँ गएर आएको र त्यहाँ के-के गऱ्‍यौ भनेर सोध्नुहुँदा उहाँहरूलाई मन नपर्ला भनेर कुनै-कुनै कुरा लुकाउनुहुन्छ कि?
जिम्मेवार हुनुहोस्‌। घरको सबै नियम पालन गर्नुहोस्‌। तपाईँलाई अह्राइएका कामहरू गरिहाल्नुहोस्‌। समयनिष्ठ हुनुहोस्‌। स्कुलका गृहकार्यहरू राम्ररी गर्नुहोस्‌। तोकिएको समयमै घर आइपुग्नुहोस्‌।
“मानिलिनुहोस्‌, तपाईँको आमाबुबाले तपाईँलाई साथीहरूसित घुमघाम गर्न अनुमति दिनुभएको छ र बेलुकी नौ बजेभित्र घर फर्कनु भन्‍नुभएको छ। तर तपाईँ १०:३० तिर मात्र घर फर्कनुहुन्छ भने फेरि पनि साथीहरूसित बाहिर जान अनुमति पाउने आशा नगर्नुहोस्‌!”—रायन।
बाइबल भन्छ: “हरेकले आफ्नो जिम्मेवारीको भारी आफै बोक्नेछ।”—गलाती ६:५, फुटनोट।
यसबारे सोच्नुहोस्‌: आफूलाई अह्राइएको कुनै-कुनै काम तपाईँलाई मन पर्दैन होला वा घरका कुनै-कुनै नियम चित्त बुझ्दैन होला, तैपनि तपाईँले ती पालन गर्ने सन्दर्भमा कस्तो नाम कमाउनुभएको छ? अनि समयनिष्ठ हुनेबारे नि?
धीरजी हुनुहोस्‌। तपाईँले आमाबुबाको भरोसा तोड्‌नुभएको छ भने फेरि भरोसा जित्न समय लाग्छ। त्यसैले पर्खन तयार हुनुहोस्‌।
“मेरो उमेरअनुसार आमाबुबाले मलाई अझ धेरै जिम्मेवारी नदिँदा मलाई रिस उठेको थियो। तर उमेरमा बढ्‌दै जानु र परिपक्व हुनु भनेको एउटै कुरा होइन भनेर मैले बुझेको रहेनछु। मैले आमाबुबासित आफू भरोसायोग्य छु भनेर साबित गर्ने मौका मागेँ। समय त लाग्यो तर म सफल भएँ। अनि उमेर बढ्‌दैमा भरोसा जित्न सकिँदैन, व्यवहारबाट जित्न सकिन्छ भनेर मैले सिकेँ।”—रेचेल।
बाइबल भन्छ: “तिमीहरू कस्ता मानिसहरू हौ, साबित गरिरहो।”—२ कोरिन्थी १३:५.
यसबारे सोच्नुहोस्‌: आमाबुबाको भरोसा जित्न (वा फेरि भरोसा जित्न) तपाईँले आफू ‘कस्तो मानिस हुँ’ भनेर ‘साबित गर्नुपर्छ।’ त्यसोभए तपाईँ कसरी त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ?
सुझाव: समयनिष्ठ हुनेबारे, अह्राइएको काम सिध्याउनेबारे, तोकिएको समयमा घर फर्कनेबारे वा अन्य त्यस्तै विषयमा पहिल्यै लक्ष्य तय गर्नुहोस्‌। आमाबुबालाई आफ्नो सङ्‌कल्पबारे बताउनुहोस्‌ र उहाँहरूको भरोसा जित्न आफूले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुहोस्‌। त्यसपछि बाइबलको यो सल्लाह पालन गर्न सक्दो गर्नुहोस्‌: “तिमीहरूले आफ्नो पुरानो व्यक्‍तित्वलाई फुकाल्नुपर्छ, जुन तिमीहरूको पहिलेको आचरणसित मेल खान्छ।” (एफिसी ४:२२) समय बित्दै जाँदा तपाईँको आमाबुबाले तपाईँको प्रगति देख्नेछन्‌!
“आमाबुबाको भरोसाको नाजायज फाइदा नउठाउनुहोस्‌। तपाईँको जीवनमा के-के भइरहेको छ, उहाँहरूलाई थाह दिनुहोस्‌। तपाईँले कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको राय लिनुहोस्‌। तपाईँले सही निर्णयहरू गरेको उहाँहरूले देख्नुभयो भने उहाँहरूले तपाईँमाथि अझ धेरै भरोसा गर्नुहुनेछ।”—फिबी।
“भरोसा भन्‍ने कुरा आफैले कमाउनुपर्छ। आमाबुबाले तपाईँमाथि भरोसा गर्न सकिरहनुभएको छैन भने अक्सर त्यसको पछाडि ठोस कारण हुन सक्छ। तपाईँका आमाबुबाले तपाईँमाथि भरोसा गर्छन्‌ भने तपाईँको आशा पूरा गर्न मात्र उहाँहरूले त्यसो गर्नुभएको होइन। बरु तपाईँले बुद्धिमानी निर्णयहरू गर्नुहुनेछ भन्‍ने कुरामा विश्‍वस्त भएकोले हो।”—कायली।
“आमाबुबासित सधैँ सत्य बोल्नुहोस्‌ र उहाँहरूसित खुलस्त कुराकानी गर्नुहोस्‌। उहाँहरूलाई तपाईँसित एक-एक कुरा सोध्नुपर्ने कारण नदिनुहोस्‌। बरु तपाईँ आफैले सबै कुरा प्रस्टसित बताउनुहोस्‌। यसरी तपाईँले सबै कुरा बताउनुभयो भने उहाँहरूलाई तपाईँमाथि अझ भरोसा गर्न सजिलो हुनेछ।”—कोर्टलेन।
“आफै अग्रसर हुनुहोस्‌। फेरि-फेरि भन्‍नु नपर्नेगरि आफूलाई अह्राइएको सबै काम गर्नुहोस्‌, सक्नुहुन्छ भने अह्राइएको भन्दा अझ धेरै गर्नुहोस्‌। तोकिएको समयअघि नै घर फर्कनुहोस्‌। भरोसा कमाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको आफूलाई भरोसायोग्य साबित गरेर हो।”—रेचेल।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने म आफ्नो आमाबुबाको भरोसा कसरी जित्न सक्छु?
मैले अझ धेरै स्वतन्त्रता पाउन के गर्नुपर्छ?